Manome ‘Labiera, Hena sy Fampijaliana,’ Vondrona Karnavaly Te-Hankalaza Ny Didy Jadona Miaramila Tao Brezila · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraLuiza Saturnino Braga
Voadika ny 14 Febroary 2018 7:44 GMT
Sary fonony amin'ilay tantara “Efitrano ambanin'ny tany an'ny DOPS” mampiseho ny Kolonely Carlos Alberto Brilhante Ustra, ilay mpitarika tokana avy amin'ny didy jadona nomelohin'ny fitsarana Breziliana noho ny heloka bevava fampijaliana. Sary nozaraina Facebook.
Mikasa hankalaza ny iray amin'ireo toerana maizimaizina indrindra ara-bakiteny sy ara-panehoana teo amin'ny tantaran'i Brezila ny vondrona mpikarakara karnavaly iray: Ny toby ambanin'ny tany an'ny Departemantan'ny Filaminana Ara-politika sy Ara-tsosialy (DOPS), izay nampijaliana olona an-jatony nandritra ny didy jadona miaramila tamin'ny faran'ny taonjato faha-20.
Sampana manasazy indrindra ao amin'ny fitondrana miaramila any Brezila ny DOPS, izay naka ny fahefana taorian'ny fanonganam-panjakana tamin'ny taona 1964, ary notohanan'ny sehatra mpandala ny nentin-drazana ao amin'ny fiarahamonina sy ny Departemantam-panjakana Amerikana. Nahatonga ny fionganan'ny Filoha João Goulart ny fanonganam-panjakana, hita ho mpanohana ny kômonisma i Goulart tamin'izany fotoana izany.
Araka ny filazan'ny vaomieran'ny fahamarinana ao amin'ny firenena, fara-fahakeliny olona 1 800 no nampijaliana teo am-pelatanan'ny DOPS, ary ny ankamaroan'izy ireo dia noahiahiana fa nanana hevitra komonista na mpomba ny komonista.
Naharitra hatramin'ny taona 1985 ny didy jadona ary niavaka tamin'ny fanivanana gazety, famoretana ny fihetsiketseham-panoherana, fampijaliana miverimberina, famonjàna tsy ara-dalàna, sy ny fanjavonana. Araka ny filazan'ny Vaomieram-pirenena misahana ny Fahamarinana, izay napetraky ny governemanta federaly tamin'ny taona 2011 mba hanadihady ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona nataon'ny fanjakana tamin'izany vanim-potoana izany, olona 191 no novonoina ary 243 no nanjavona. Milaza ny tatitra farany fa mety ambony kokoa ireo tarehimarika ireo, satria ireo tranga voamarina ihany ireo isa ireo.
Vaomiera iray vao nijoro enintaona monja, niteraka onjam-pahatafintohinana manerana ny firenena ny sampana karnavaly “carão do DOPS” (ny teny hoe “sampana” dia manondro ny vondrona mitarika ny sehatra karnavaly iray) rehefa nipoitra tamin'ny Facebook ny fanasana amin'ny hetsika (karnavaly).
Noravahana ny sarin'ny Kolonely Carlos Alberto Brilhante Ustra, ny hany manamboninahitra miaramila nosazian'ny fitsarana Breziliana noho ny fanaovana hetsika fampijaliana nandritra ny didy jadona, miantso ny tenany ho “vondrona lehibe indrindra manohitra ny komonisita ao Brezila” ny hetsika, manararaotra ny dika roa amin'ny teny hoe “vondrona”. Ny fanasana dia mampanantena “labiera, fampijaliana, hena, ary hira karnavaly mampijaly” ho an'izay mandray anjara.
Natsangan'ny pejy antsoina hoe “Elatra havanana São Paulo” ny hetsika, pejy izay efa nitarika hetsi-panoherana ny fitsidihan'ilay filôzôfy Amerikana mpiaro vehivavy Judith Butler tamin'ny taona lasa tao São Paulo. Niampanga an'i Butler ho “mpampiely goavana ny foto-kevitra momba ny vehivavy” ireo mpanao fihetsiketsehana ary nandoro saribakoly amin'ny endrik'i Butler mihitsy aza no sady mihiakiaka hoe “dory ny mpamosavy” teo anoloan'ny toerana izay nanaovany fampianarana.
Tamin'ny 16 janoary, nanokatra fanadihadiana mikasika ireo mpikarakara ny “Porão do DOPS” ny Minisiteram-panjakan'i São Paulo. Araka ny voalazan'ireo mpampanoa lalàna, “manevateva ny zo hahalala ny fahamarinana sy hahatsiaro” ity vondrona ity ary koa “mampiroborobo fiarovana ny heloka bevava fampijaliana”. Nangataka tamin'ny polisy ny mpampanoa lalàna mba hamotopototra ity farany ity, izay azo saziana hatramin'ny enim-bolana an-tranomaizina araka ny lalàna Brezliana.
Tamin'ny fanamarihana nozaraina tao amin'ny Facebook, nanambara ireo mpikarakara fa “tsy hihemotra manoloana ny proselytisma (zotom-po hampiely) ideolojika” izy ireo. Nanome soso-kevitra ihany koa izy ireo fa tokony “hanararaotra ny fialan-tsasatra sisa tavela mba ho ao Venezoela” ireo mpampanoa lalàna.
Hatramin'izao dia hetsika Facebook ihany ny vondrona, satria tsy hita ao amin'ny fandaharana ofisialy amin'ny karnavaly ao São Paulo. Niova hevitra ny tompon'ny trano fisakafoanana nanaovana ny fivoriana taorian'ny fiantraikan'ny raharaha. Araka ny voalazan'ireo mpikarakara, hampahafantarina amin'ny alàlan'ny mailaka ihany ho an'ireo izay nanao sonia sy nandoa vidim-pidirana (R $ 10) mialoha ny toerana vaovao hanaovana ny hetsika.
Ny sehatra ara-politika amin'ny karnavaly
Niteraka adihevitra be momba ny fahatsiarovan'ny vahoaka ny didy jadona miaramila ny fanamafisana vao haingana ny hetsika elatra havanana any Brezila.
Hatramin'ny hetsi-panoherana tamin'ny taona 2013 – izay nahatonga ireo andiana hetsika sarotra nialoha ny fanonganana ny filoha Dilma Rousseff tamin'izany fotoana izany tamin'ny taona 2016 – nidina an-dalambe sy tao anatin'ny tambajotra sosialy ireo vondrona mba haneho ny fanohanan'izy ireo ny fitondrana teo aloha, ary koa mitaky ny miaramila mba hiverina eo amin'ny fahefana.
Iray amin'ireo mpanohana malaza indrindra an'ity fandaharam-potoana ity ilay mpanao politika Jair Bolsonaro, mpifaninana ho filoham-pirenena amin'ny taona 2018, nidera ny kolonely Ustra izy no sady nifidy ny fanonganana an'i Rousseff. Nosamborin'ny fitondrana tamin'ny taona 1970 i Rousseff, fony izy mpikatroka ara-politika nanohitra ny fitondrana, ary nampijaliana tany am-ponja.
Filaharan'ny Vondrona Sovietika taona 2015 tamin'ny karnavaly São Paulo. Avy amin'i Mark Hillary tao amin'ny Flickr (CC-BY 2.0)
Nanambara ireo mpikarakara ny vondrona karnavaly DOPS fa valin'ny “Vondrona Sovietika” efa napetraka, izay nilahatra hatramin'ny taona 2013 manamarika ny sosialisma sy mitondra anarana izay milalao amin'ny voambolana jeopolitika [“vondrona”] ny hetsika. Tao anatin'ny dimy taona, nivoaka avy amin'ny fivoriana tsy nampoizina nataon'ireo namana avy amin'ny elatra havia izay nivorivory nanodidina ny fiantsenana iray nandritra ny parady nahitana olona teo amin'ny 20.000 teo ny vondrona .
Araka ny efa nantenaina, niparitaka tamin'ny aterineto ny adihevitra mivaingana momba ireo vondrona roa. Nanontany ny maha ara-dalàna ny fampitoviana ireo fitondràna roa ireo ny mpaneho hevitra ary nilaza anarana toa manesoeso sy tsy mankasitraka ny “vondrona Sovietika” Tao amin'ny fampahalalam-baovao sosialin'ny Breziliana, mahazatra ho an'ireo elatra havanana ny miantso an'ireo elatra havia hoe “komonista”, na milaza azy ireo “mandehana mankany Kiobà”, fitenenana ampiasaina am-pihetseham-po tamin'ny hiran'ny vondrona Sovietika.
Misy fahasamihafana eo amin'ny vondrona Sovietika miantso ny tenany “vondrona sovietika” fa tsy “vondrona goulag (tobin'asa an-terivozona)” izay tsy nazava tsara tamin'ny olon'ny “vondrona ambanin'ny tany dops” rehefa namorona ity anarana ity izy ireo.
Desculpa Gustavo, mas você só deixou mais claro o eufemismo usado. Pra mim, me permita discordar, não muda em nada. Se fosse “Bloco da Ditadura” (não exaltando diretamente a tortura) e nele todos usassem camisas com ratos em barris ou fotos de fuzilamento, poderia então?
[Fábio]: Miala tsiny ry Gustavo, fa nampazava fotsiny ihany ny fanalefaham-piteny nampiasain'izy ireo ianao. Ho ahy, avelao aho tsy hitovy hevitra, tsy manova na inona na inona izany. Raha “Vondrona Didy Jadona” izany (tsy mankalaza mivantana ny fampijaliana) ary noho izany, nanao akanjo ratsy indrindra miaraka voalavo anaty barika na sarin'ny fitifirana izy ireo, ka ho afaka hanao izany ve izy ireo?
Ho ahy, ny fanontaniana dia: mankalaza tokoa ny URSS na ny goulag ve izy ireo sa mampiasa azy io fotsiny am-piesoesoana, mamazivazy zavatra izay heverina matetika fa an'ny ankavia.
Tamin'ny volana Desambra, nanambara ny Vondrona Sovietika fa tsy handray anjara amin'ny karnavaly São Paulo noho ny olana amin'ny fanjakam-birao misy ao amin'ny lapan'ny tanàna.